Ọnọdụ okpomọkụ dị elu na mmekọrịta ha na ọnụọgụ ọnwụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Igwe dị elu na mmekọrịta ha na ọnụọgụ ọnwụ
A naghị enwekarị ezigbo okpomọkụ na ihe ọ bụla dị mma. Ha nwere ike ibute oke ihu igweOtu oke ifufe ahụ na-abawanye n'ihi mmiri mmiri, oke ụkọ mmiri, mkpasu iwe nke ọkụ, wdg. Agbanyeghị, enwere mmekọrịta dị n'etiti okpomọkụ kachasị elu na ọnụọgụ ọnwụ.
Maka onye ọ bụla enwere ihe egwu. Ihe omume ma obu oru ndi apuru ime n'èzí dikwa oke egwu. Kedu ka ikpe a ga-esi kwaa ụta site na nwoke 54 dị afọ nwụrụ 2 izu gara aga n'ihi oke ọkụ mgbe ọ na-arụ ọrụ asphalt na Morón de la Frontera. Mana enwere otu ndi mmadu, n'agbanyeghị oru ha na-aru, ha nwere ike inweta nsogbu nke oke oku.
Kedu onye na otu o si emetụta ya?
Na ọkwa anụ ahụ, anyị na-ezute ndị agadi, ndị nwere obi obi, akụkụ okuku ume ma ọ bụ ọrịa shuga. Egosiputala na obughi nani ikpughere ekpomoku di elu bu ihe kpatara ya, kamakwa oge o nogidere, igbatị nke okpomoku di elu. N’ụbọchị nke nwere okpomoku dị elu, ọnụọgụ nke ọnwụ na-arị elu 4% jiri ya tụnyere nkezi atụmatụ. Bọchị 2 nwere oke okpomọkụ, ọnwụ na-ebili na 10% n'echi ya, na 22% n'ụbọchị nke atọ. N'ime ụmụaka n'okpuru otu afọ ọ na-arị elu ruo 1%, na okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na ha nwekwara iku ume, nri nri ma ọ bụ ọnọdụ obi.
Na ọkwa uche ọ na-akpatakwa mbibi, n'ihi na achọtara mmekọrịta n'etiti ọnụ ọgụgụ igbu onwe onye na ebili mmiri.
N'ileghachi anya na ndekọ ndị ahụ, anyị na-ahụ oke ikuku ọkụ nke dakwasịrị Europe na 2003. E nwere ọnwụ 35.000 karịa atụ anya.
Cheta mkpa ọ dị ịhapụ ịhapụ okpomọkụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ dakwasịrị. Ghichaa onwe gị ma zere arụ ọrụ n'oge oge kachasị elu. Karịsịa n'etiti ndị kachasị ike, ma ha niile. Mmetụta ya na ahụ anyị na-emebi oke okpomọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Igwe dị elu na mmekọrịta ha na ọnụọgụ ọnwụ
India na-ewu ụlọ ndụ akwụkwọ ndụ iji gbochie mgbanwe ihu igwe
Mmụba nke mgbazinye ụgbọ ala na-emetọ ikuku na Balearic Islands